Ithegi: ijonathan salem basketin | Martech Zone
Ithegi: jonathan salem basketin
Intengiso yeendaba zeNtlalo ayiphumeleli
Lwesine, Matshi 24, 2011 NgoLwesibini, Novemba 29, 2011 Douglas Karr
Kunyaka ophelileyo, ndibhale iposi ukuphendula uJonathan Salem Baskin, ndithatha umbono wakhe wokuba iMithombo yeendaba yeNtlalo inokuba yingozi kwiinkampani. (Ndivumile naye kubalo oluninzi). Ngeli xesha-ngokoluvo lwam-uMnu Baskin ubethelele. Yonke inkampani iye yaxhuma kwi-bandwagon yemithombo yeendaba kwezentlalo, inyusa inkcitho yokuthengisa kuloo nkundla, kodwa bambalwa ababona imbuyekezo ababenethemba layo. IBurger King iye yagcoba
Bendicinga ngokuchaza esi sithuba, Kutheni uJonathan Salem Baskin engalunganga… kodwa ndiyavuma naye kumanqaku amaninzi kwisithuba sakhe, ukuLwa okuyingozi kwiWebhu yeNtlalo. Ndiyavuma, umzekelo, ukuba amajelo eendaba ezentlalo ahlala ezama ukutyhala amashishini ukuba asebenzise imithombo yeendaba ngaphandle kokuqonda ngokupheleleyo inkcubeko okanye izixhobo kwinkampani abasebenza nayo. Akufanele kumangaliswe, nangona kunjalo. Bazama ukuthengisa imveliso ... yabo
Yintoni Edlula Kuwe?
NgoLwesithathu, Oktobha 24, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Izolo bendinesidlo sasemini kunye nomhlobo wam olungileyo, uBill. Njengokuba besisitya isuphu yethu emnandi yenkukhu e-Scotty's Brewhouse, uBill kwaye ndixoxe ngalo mzuzu ungathandekiyo apho ukusilela kutshintsha kube yimpumelelo. Ndicinga ukuba abantu abanetalente yokwenene bayakwazi ukubona ngomngcipheko kunye nokuvuza kwaye benze ngokufanelekileyo. Batsiba emathubeni, nokuba umngcipheko awunakoyiswa… kwaye oko kukhokelela kwimpumelelo yabo. Ukuba ndilahlekelwa nguwe, bambelela kum. Nantsi